ရခိုင်ပဋိပက္ခ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး 4.5
ကျွန်တော့အမြင်ကတော့ ဒါဟာ ကုလက မီးမွေး
ပထမက လိုချင်တာကိုတောင်းမယ် ပုံသွင်းမယ်
ပုံသွင်းမရတော့ ယန်းဟီးလီကို လူမိုက်ငှားမယ်
ယန်းဟီးလီဟာ လူမိုက်မှန်း နိုင်ငံတကာသိတော့
အခုတော့အားလုံးဟာ ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်ပြီ
ကုလက ဆရာကြီးဝင်လုပ်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး အဲဒီတော့ ဒီအဖြစ်က ကုလကြောင့်ဖြစ်ရတယ်
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမှတာဝန်ယူစရာမလိုဘူး အဲဒီ
ဘင်္ဂလီတွေကို မြန်မာနိုင်ငံက ပျက်စီးရှုံးဆုံးတာတွေကို ကုလက ချွင်းချက်မရှိ လျော်ပေးရမယ်
Author — Insane Unicorn
Author — Nai Oo
Author — Myo Chit
Author — june nathan
Author — 袁家富
Author — Thoo myat
ွချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ် ပြောဆို ရမ်းကား ဆဲရေး ပြုနေကြတဲ့လူငယ်ထုများခင်ဗျာ၊ နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ် နှစ် ရောက်တဲ့ အထိ စိတ်တွေပြော့ပြောင်း ပေးချိန် တန်ပါပြီ
un or ingos or ngos always make troubles by under the name of human right and humanitain. why they didn't say about human right in middle east countries. especially in islam states. why?
Author — robert omoore
သိခငျြတယျလေ ကမြလဲသိခငျြတယျလေ ဘာတှလေဲဆိုတာလောကျတော့ ရဘေုယလောကျတော့ သိပါရစတေော့
Author — wuttyee lynn
Author — Chit Shwe
ဗမာ့ နည်း ဗမာ့ ဟန်မုတာဝါဒ တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တာ ဟေး
Author — deevid maran
သမ္မတ Trump ရဲ့ ကုလအထွေထွေညီလာခံ မိန့်ခွန်း
နေတိုးမဟာမိတ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ်အခန်းကဏ္ဍ
Oct. 1st Week TV Magazine - Part III (VOA Burmese)